Tier4အင်ဂျင်
လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးစွာ ရိတ်သိမ်းနိုင်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန် စွာခြွေလှေ့ပေးနိုင်သည် Yanmar AW82GV-R ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်
သီးနှံများအား အရည်အသွေးကောင်မွန်စွာ ရရှိအောင် ခြွေလှေ့ပေးနိုင်ခြင်း ၊အလုပ်ပြီးမြောက်မှု့ စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်မားဆုံးကို ရရှိနိုင်ခြင်း၊မည့်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိနိုင်ခြင်း၊ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းခြင်း ၊ မောင်းနှင်းခြင်းများကို လွယ်ကူစွာ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း အစရှိသည့် စွမ်းဆောင်ရည်များကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့်အတွက် လုပ်ငန်းပြီးမြောက်မှု ပိုမိုတွင်ကျယ်ပြီး၊ စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်အဝဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်နည်း ပ ါးစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၁. အချက်အလက် နံပါတ် (၁) သီးနှံများ အရည်အသွေးကောင်းမွန်အောင်ခြွေလှေ့ပေးနိုင်ခြင်း
ရိုတာ နှစ်ဆင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ရှေ့ဘက်ရိုတာသည် လုပ်ငန်းသုံးခု ပြုလုပ်ပါသည်-(၁)ခြွေလှေ့ခြင်း (၂)သီးနှံများချောမွေ့စွာသယ်ဆောင်နိုင်ခြင်း (၃)အမှုန်များချော့နည်းစေခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ဒုတိယ ရိုတာ( သီးနှံခြွေရိုတာ )သည် အချင်း ၆၄၀ မီလီမီတာ ၊ အရှည် ၁၈၅၀ မီလီမီတာ တပ်ဆင်ထားခြင်းထူးခြားချက်အနေဖြင့် ကောင်းမွန်ဆုံးခြွေလှေ့ပေးနိုင်ခြင်း ၊ စပါးစေ့ ကောင်းမွန်စွာ ခွဲခြားပေးနိုင်ခြင်း ၊ စပါးလေလွင့် ဆုံးရှုံးမူ နည်းပါးခြင်း စသည့်အချက်များကိုလုပ်ဆောင်ပေးသည်။
၂. အချက်အလက် နံပါတ် (၂) အကောင်းဆုံးအသန့်စင်ဆုံးစပါးစေ့အခြေအနေများရရန် ချိန်ညှိခြင်း
သီးနှံအခြေအနေအပေါ်တွင်မူတည်၍ ပိုမိုသန့်စင်သော သို့မဟုတ် အလေအလွင့်နည်းပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော စပါးများ ရရှိနိုင်ရန် အတွက် စပါးခြွေလှေ့သည့်အပိုင်းကို အဆင့် (၅)ဆင့်ဖြင့် ချိန်ညှိ နိုင်ပါသည်
၃. အချက်အလက် နံပါတ် (၃) စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Yanmar TNV ဒီဇယ်အင်ဂျင်
Yanmar TNV အင်ဂျင်ကို ဆီကုန်ကျမှုနည်းပါးစွာဖြင့် တည်ငြိမ်မြင့်မားသည့်စွမ်းအား ကို တချိန်တည်းတွင် ရနိုင်ရန် အတွက် Yanmar ၏ ဆန်းသစ်သောနည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ် ထားပါသည်။
– TNV အင်ဂျင်သည် ရိတ်သိမ်းနေစဉ်အတွင်း ရုတ်တရက် ဝန်များလာချိန်တွင် စက်စွမ်းအား တည်ငြိမ်စေရန်အတွက် အင်ဂျင်အပတ်ရေ (rpm) ကို ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။
၄. အချက်အလက် နံပါတ် (၄) အမြင့်ဆုံးမောင်းနှင်အရှိန်နှုန်း
Yanmar ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်သည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး စက်ကိရိယာများထဲတွင် အမြင့်ဆုံး
မောင်းနှင်အရှိန်နှုန်းသာမက အလုပ်ပြီးမြောက်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုရရှိစေနိုင်ခြင်း ။
စိုထိုင်းသော စပါး ၊ ယိုင်လဲသော စပါး ၊ အထွက်နူန်းကောင်းမွန်သော စပါးခင်းများအား ရိတ်သိမ်း ရာတွင် အလေအလွင့် နည်းပါးပြီး
၊ သန့်စင်ကောင်းမွန်သော စပါးများ ရရှိနိုင်ခြင်း ။1 second လျင် 1.91 မီတာ နှုန်းဖြင့်မောင်းနှင် နိုင်သည်။ရိတ်သိမ်းနိုင်မှုအကျယ်သည် ၂ မီတာ ရှိသောကြောင့် ရိတ်သိမ်းရာတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် ထောင့်ချိုးများကိုလည်း တိကျစွာ ချိုးကွေ့နိုင်ပါသည်။
၅. အချက်အလက် နံပါတ် (၅) အစိုကွင်းတွင် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း
Yanmar ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်သည် မြေပြင်ကင်းလွတ် ၃၂၈ မီလီမီတာ ရှိသဖြင့် အလုပ်
လုပ်နေစဉ်တွင် ဂီယာဘောက်(စ်)ကို ရိုးပြတ်များနှင့်ကောင်းစွာလွတ်ကင်းနိုင်ရုံသာမက ၊
လုံလောက်သော အကွာအဝေး လွတ်ကင်းသည့်အတွက် လယ်ကွက် တစ်ကွက်နှင့် တစ်
ကွက်ပြောင်းရွှေ့ရိတ်သိမ်းရာတွင် လွယ်ကူစေပြီး ၊ စိုစွတ်သော လယ်ကွက်များရိတ်သိမ်း
ရာတွင်လည်း မပြောင်းလဲသော လုပ်ဆောင်မှုကို ရရှိနိုင်ခြင်း ။
၆. အချက်အလက် နံပါတ် (၆)လုပ်ဆောင်ချက် ၂ ချက်ပါသော ဂီယာမောင်းတံ
Yanmar ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်သည် မကြာခဏ အသုံးပြုရသော လုပ်ဆောင်မှု့ များဖြစ်သည့် ကွေ့ဝိုက်မောင်းခြင်း ၊ ကောက်ဆွရစ်ဘီးနှင့် စပါးပင်ရိတ်ဓါးသွားများကို ချိန်ညှိရာတွင် ဂီယာမောင်းတံ တစ်ခုတည်းဖြင့် ထိမ်းချုပ်မောင်းနှင်နိုင်ခြင်း။
အမျိုးအစား4Cylinder,4 Stroke,water-cooling,single-row,vertical
Full Rubber Crawler
အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု HST ကိုဟိုက်ဒရောလစ် side clutch ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်
ရိတ်သိမ်းအမြန်နှုန်းပြောင်းဂီယာ အနှေး/ပုံမှန်/အမြန် ဂီယာ(၃)ဆင့်ပါဝင်သည်
m/s Lower : 0~0.95 ,Standard :0~1.55,Fast : 0~1.91
ခြွေလှေ့သည့်အမျိုးအစား ရိုတာနှစ်စုံဖြင့် ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့သည်
12Volt Battery Starting,Lighting Equipment,Alarms Electrical system
ဟက်တာ / နာရီ
AW82GV-R မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ နှင့် ထောက်ပံ့ရေး
အုပ်စုအဖွဲ့စည်း၏ နာမ်မည်ကို အတုပပြုလုပ်ပြီးလိမ်လည်ခြင်းများကို သတိပြုစေလိုပါသည်။
မူပိုငျခှငျ့ © YANMAR HOLDINGS CO., LTD. မူပိုငျခှငျ့အားလုံးလကျဝယျပိုငျဆိုငျသညျ။